Jaamacadda Cige waxay shaqaaleysiin doontaa shaqaalaha tacliinta | RayHaber | raillynews
HomeGUUDShaqooyinkaJaamacadda Cige waxay shaqaaleysiin doontaa shaqaalaha tacliinta
Xubnaha macalimiinta 2547 waa la shaqaaleysiin doonaa iyadoo loo eegayo qodobbada la xiriira ee Sharciga Tacliinta Sare iyo Xeerarka u yaal Gudbinta iyo Magacaabista Xubnaha Kulliyadda.
Murashaxiinta, Sharciga Shaqaalaha Rayidka ah ee 657 48. waa inay buuxiyaan shuruudaha ku xusan.
Professor murashaxiinta u adeegsan doona shaqaalaha; 6, oo daboolaya koobiga koorsada vitae, kaarka aqoonsiga, hal sawir, shahaado militari, dukumiintiyo waxbarasho (shahaadada koowaad, shahaadada jaamacadda, shahaadada jaamacadda), liiska daabacaadda, shahaadada luqadda ajnabiga, daraasadaha sayniska iyo daabacaadaha. (lix) koox oo u codso Waaxda Shaqaalaha shaqsi ahaan.
Professor associate murashaxiinta u adeegsan doona shaqaalaha; 4, oo daboolaya koobiga koorsada vitae, kaarka aqoonsiga, hal sawir, shahaado militari, dukumiintiyo waxbarasho (shahaadada koowaad, shahaadada jaamacadda, shahaadada jaamacadda), liiska daabacaadda, shahaadada luqadda ajnabiga, daraasadaha sayniska iyo daabacaadaha. (afar) koox oo u codso Waaxda Shaqaalaha shaqsi ahaan.
XUQUUQDA QALBINTA DHAQANKA murashaxiinta u adeegsan doona shaqaalaha; 4, oo daboolaya koobiga koorsada vitae, kaarka aqoonsiga, hal sawir, shahaado militari, dukumiintiyo waxbarasho (shahaadada koowaad, shahaadada jaamacadda, shahaadada jaamacadda), liiska daabacaadda, shahaadada luqadda ajnabiga, daraasadaha sayniska iyo daabacaadaha. (afar) fayl koox ayaa si shaqsiyan ah ugu dabaqi doona Deans of Faculty / Iskuulka / Machadyada Machadyada.
1-U-sinnaanta shahaadooyinka dibedda laga soo qaatay waa in ay ansaxiyaan Gudiga Kala-guurka.
2-Xilliga kama dambaysta ah ee arjiga waa 15 maalmood laga bilaabo taariikhda la daabacay xayeysiinta xayeysiiska Rasmiga ah (Xilliga Kama Dambeeya: 17.12.2019)
3-Shaqaalaha hay'ad kasta oo dawladeed (xitaa haddii ay horay uga soo shaqeeyeen) waa inay bixiyaan caddeyn adeeg shahaado oo sharciyeysan oo ka socota machadka ay ka shaqeeyaan.
4-Shuruudaha Codsiga Xubnaha Xubnaha Jaamacada https://personeldb.ege.edu.tr ayaa la gaari karaa.
5-our Ad www.ege.edu.t waa waxaa laga heli karaa at.
6- Waa inay buuxiyaan shuruudaha guud ee ku jira Xeerarka mabaadi'da si loogu hoggaansamo barashada luqadaha ajnabiga iyo baridda luqadaha qalaad ee machadyada sare.
Shaqo qorista Shaqaalaha Akadeemiyadeed ee Jaamacadda